Kukho uluvo lokuba abafazi bathanda ngeendlebe zabo. Nangona kunjalo - inkolelo endala yokuba indoda yangempela kufuneka ibe ngummeli omhle kakhulu weentsapho.
Ngoko kutheni isifo esithintekayo sithandeka kubantu abathandekayo abanokubonakala ngokugqithisileyo kunye nokwakhiwa kwezemidlalo? Kulula: inyaniso kukuba umnqweno wesifazane ukuva izinto ezimnandi malunga naye akafaki ukukwazi ukuqonda ubuhle bokwenene. Ukubeka nje, kungekhona nje ukuba iindlebe zithanda abameli be-half half plan of the planet, kodwa abanakucinga ukuba amehlo ajabulise i-charm ye-satellite.
Ubuhle babafana buchongiwe ngokusilela.
Ngokwezibalo kwihlabathi lamabhinqa amahle kuninzi abafana abathandekayo. Oku kubangelwe kwiimeko ezihlukeneyo: nge-genetics, i-psychology yabazali, i-ecology kunye neenketho zokukhetha, abafazi abazitshintsha ngayo ngesivinini esikhulu. Nangona kunjalo, ezininzi iingcali ezibandakanyekayo ekufundeni izinto ezichaphazela ukuvavanya kwindoda yomfazi yindoda, vumelana: iindoda ezintle kakhulu kumantombazana zizo ezo ntlobo zabalandeli abanqabile. Ngamanye amazwi, iifashthi zobuhle bendoda kuxhomekeke kukuphi uhlobo lwabameli bezesondo eziqinileyo eziqhubekayo kule ndawo okanye kwindawo yendawo yolwazi.
Ngoko, ngokomzekelo, eSpanish, abafazi bayaphambuka kunye nabafana abaneenwele ezimhlophe kunye negrey okanye isobala eliluhlaza. I-blondes isandula ukuthandwa ngokungaqhelekanga kumazwe ase-Arab okanye e-Italy. Isizathu siyabonakala: amadoda kula mazwe amnyama, anamehlo amnyama kunye neenwele ezimnyama. Kwaye abantu abaqaqambileyo bahlukileyo. Yingakho bethandwa. Ngezizathu ezifanayo, kukho ubungqina obungabonakaliyo beengcamango eRashiya: abathile abasetyhini abakhulumiyo phambi kwamehlo amnandi, abomlilo obushushu abanamehlo amnyama, kwaye abanye bakulungele ukubalekela ekupheleni kwehlabathi kubayeni bobuNordic. Kuphela kwilizwe apho phantse zonke iintlanga zomhlaba zihlanganisene, kukho phantse zonke iintlobo zobuninzi bobuninzi bomzimba. Kwaye nabasetyhini ngezizathu eziqondakalayo zahlula kwiimbono.
Enyanisweni, ubuhle besilisa buyahlukahlukileyo: kumgangatho wabantu abahle kakhulu emhlabeni, umzekelo, kukho abameli bezesondo eziqinileyo, obonakalayo kwiimpawu zobuhle eziqhelekileyo kude - uB Brad Pitt okanye u-Orlando Bloom akaze abe mhle ngezinga elikhoyo. Kodwa baxhamla i-charm etholakalayo kumadoda ambalwa. Kwaye, njengabameli abanqabile ngokwenene kwisiqingatha sobuntu, bona, ngaphandle kweenkcukacha zangaphandle ezivelele, bakwazi ukuphumelela iintliziyo zezigidi zamabhinqa ezithandwayo.
Umzobo wesimo esihle.
Ngokuqinisekileyo, bangaphi abantu abasetyhini kwihlabathi, ezininzi iingcamango malunga nokuba ngabaphi abona bahle kakhulu. Kwabanye, bafana nabadlali abakhethiweyo bezakhiwo, ukuphakama okufutshane kunye nempawu ezintle. Amanye amantombazana abaziboneli ngokwasemgangathweni ohlukeneyo wobuhle bendoda, ngaphandle kwendoda enamehlo aluhlaza, iinwele zehashe zesikhonkwane, i-physique ephathekayo. Kanti abanye bajonge ngamagagasi e-turquoise ayo amehlo akhe aluhlaza okwesibhakabhaka ngobuso obuhle kunye nezixhobo ezinkulu. Kodwa, ngokutsho kophando lwangoku, kukho iintlobo ezintathu zamadoda angabonwabela ngabaninzi abasetyhini emhlabeni.
Okokuqala, i-macho. I-Swarthy, eqinile, kodwa ingagxinwa, ukuphakama okufutshane-ukusuka kwi-1, 7m, ngekhanda lamakhanda abamnyama okanye abamnyama kunye nokumomotheka kwezinyo ezimhlophe. Loo mntu, ngaphezu koko, egqoke i-suitim den, akakaze afunde ubunzima bomntu, obunokungabikho kwengqalelo yabesifazane. Kuyo yonke indawo ngokubonakala kwakhe, ininzi yeembonakalo ezibonakalayo zamehlo enothando ziza kuphendulwa. Kodwa kufuneka kuqatshelwe ukuba uhlobo olunjalo lwamadoda ludla luya kudibanisa. Phakathi kwe "macho" ngokuqhelekileyo kufumaneka i-odnolyuby. Ewe, uyazi ixabiso lobuhle bakhe obuhle. Ngako oko, ukungabi nantembelo kunokukhathazeka kakhulu.
Okwesibini, ibanga elide, elinomlomo okhukhulayo, owakhiwa phakathi kunye nomnyama omnyama okanye ohlaza okwesibhakabhaka. Laba bantu bahlaselwa ngabantu abathandekayo. Yingakho babe yinto ebalulekileyo yabasetyhini. Yena, njengememori, uzibongela kwaye uyisebenzise ngokupheleleyo ngaphandle kwemida. Ubunjani, obubonakalayo obubonakalayo, iimpawu zobugcisa kunye nendlela yokuthengisa yezambatho - yiloo nto ixhaphakileyo kwimeko enjalo. Kukho ubuncinci beenwele emzimbeni wakhe. Yintoni eba sisizathu esongezelelweyo sokubhenqa kwabasetyhini kwaye sisona sizathu esibalulekileyo sokubonakala kwezinto ezininzi.
Okwesithathu, ii-classic ziyintliziyo ebomvu-eninzi enezinwele ezimnyama, isibalo se-Apollo, imilinganiselo yokwazi konke nokuzithemba, ukubetha ngaphaya kwemida. Ngokuqhelekileyo - ngeempawu ezintle, impumlo echanekileyo kunye neliso le-almond. Indoda enjalo ayiyazi kuphela into enokuyenza kunye nomfazi wedwa, kodwa oko akufunayo ukuthetha, ngoko ufuna ukukhawuleza ukuhlala naye.
Umntu omhle kakhulu ngowam.
Kwiminyaka emininzi yoluntu, izazi zengqondo, abafazi kunye namadoda bafuna impendulo yalo mbuzo - ukuba ngubani owona mhle kunabo bonke. Kwada kwada kwangoku i-intanethi ye-beauty beauty is not deduced. Kutheni? Kulula: umntu ngumntu, eneempawu kunye nezinto ezithandayo, kwaye umfazi unobuntu obubucayi. Kwaye ubuhle bezinto zangaphandle kuye kwavela kwangaphambili kwaye namhlanje buhlala kwindawo yesibini - emva kobuhle bamazwi athethayo. Konke okufanayo, abafazi ekuqaleni bathanda ngeendlebe zabo, kwaye ngoko ngamehlo abo. Ngoko ke, nakubani na ummeleli wesini esicuthakathaka, indoda enhle kunazo zonke ikwazi ukuphumelela intliziyo yakhe. Kwaye akukhathazeki ukuba yintoni na? Kuloo job "indawo ka-Elvis Presley" enamehlo amakhulu amaninzi, okanye umntu ozolileyo evela kwindlu elandelayo enepop ebomvu. Into ephambili kukuba nguye yena kuphela, oyingqayizivele kwaye obalaseleyo kuwo onke amadoda eplanethi.
Ukongezelela, ubuhle bendoda kumfazi alufani nokuqonda ubuhle besifazane. Ukuba umntu ucinga ibhinqa elihle, ngokuqinisekileyo uya kulangazelela ukumbamba, ukuphumelela le pearl yeholo kwaye ube kufuphi naye ixesha elifutshane. Kwaye kwabaninzi abasetyhini, abakhethiweyo (ngonaphakade okanye ngaphambi kokuxabana kokuqala) sele beyenziwe, umfana omhle ufana nomsebenzi wobugcisa: banokuyithanda okanye bayamhlonela, kodwa inkokheli yokubamba kwayo akunakwenzeka ukuba imshiye i-quay yayo ethembekileyo.
Amadoda ayathanda abancinci nabancinci abasetyhini
Xa le ntombazana ishiye umfana, yintoni na ngoku kuthetha?
Yiyiphi intando yeplastiki eyenziwa nguVladimir Putin: iifoto ngaphambi nangemva kweplastiki
I-Horoscope: ibhinqa le-scorpion, indoda-ithole
Isaladi somsila omnyama
Khuphula umntwana okhutheleyo
Ukulimala komlenze wesibeleko
Izilwanyana zonyango lwe-Antipyretic